အခန်းဆက်​ ပြဇာတ်​ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » အခန်းဆက်​ ပြဇာတ်​	17
Posted by naywoon ni on Mar 11, 2015 in Poetry | 17 comments
အခန်းဆက်​ပြဇာတ်​ ပွဲက ကြည့်​မ​ကောင်းပါဘူး
ဘယ်​နဲ့ ဓမ္မနဲ့ အဓမ္မ
အဓမ္မ ဘက်​ကချည့်​ နိုင်​​နေတာ
ဆဲကြ ဆိုကြ ကျိမ်​တွယ်​ကြနဲ့
သူတို့ပါလာတဲ့ အလင်းဓာတ်​မီးနဲ့ ထိုးကြည့်​​နေကြတယ်​ ။
ရုတ်​စိ ရုတ်​စိနဲ့ ။
ကန့်​လန့်​ကာ ဇွတ်​အတင်းချပြီး တစ်​ခန်းရပ်​နားလိုက်​တယ်​ ။
ပရိဿတ်​​တွေက ထမပြန်​ကြ​သေးဘူး ။
အမှန်​တရားဘက်​က ဘာလို့ အရှုံး​ပေး​နေရသလဲ
မ​ကျေမနပ်​နဲ့ ဖျစ်​​တောက်​ဖျစ်​​တောက်​ တီးတိုး​ဝေဖန်​ရင်းနဲ့
ခဏ ပိတ်​ကွယ်​ထားတဲ့ ကန့်​လန့်​ကာကြီးကို စူးစူး စိုက်​စိုက်​ ကြည့်​​နေကြ​လေရဲ့ ။ ​နေ၀န်းနီ 8:54Pm
မြစပဲရိုး says: အဓမ္မ က ဇာတ်ဆရာ ရဲ့ စကား နောက်မှာ လူ တွေ က တစ်ညီတစ်ညာထဲ က ပြနေလို့ ပေါ့ အဘနီ။
ဓမ္မ ဘက် မှာတော့ ဇာတ်ဆရာ တွေ အပေါ သား။
ဓမ္မ ဆိုပြီး ကိုယ်ထင်ရာ ကြဲ နေကြတာ။
မနိုင်လဲ ငါကြိုက်တာ ငါလုပ်တာ ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူနေကြ ရင်လဲ ပြီးတာပါဘဲ။
အနိုင် ကို တော့ မှန်းနေနဲ့ပေါ့။
ဒီ အချိုး တွေ နဲ့ ကတော့ နောက် တစ်ခန်း ကိုလဲ သိနေပြီးသား။
black chaw says: အမှန်ကိုဆိုတဲ့ ငါ့ ပါးစပ်ကို ပိတ်စဉ် အခါမှာ
အမှန်ကိုမြင်တဲ့ ငါ့ မျက်လုံးကို ဖေါက်ပါတော့လား…။
အနိုင်ရဖို့ ဆိုရင် နည်းဗျူဟာလည်း ကြွယ်ဝဖို့ လိုအပ်လှပါတယ်ဗျာ…။
မနေ့က ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် အနိုင်ရထားခဲ့ပြီးသားဟာကို
နည်းဗျူဟာ အလျှော့အတင်း မရှိခဲ့လို့
ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဖြိုခွဲခံခဲ့ရတယ် လို့ ကျွန်တော်က စွတ်စွဲချင်ပါတယ်…။
ကိုက် ၃၀၀ လောက်ပဲ ဝေးတဲ့ ကားတွေပေါ်ကိုတက်ဖို့
ကိုယ့်ဘက်က နည်းနည်းလေး ကြိတ်မှိတ်ပြီး သည်းခံလိုက်ပါတော့လား…။
သူတို့ဘက်က အစကတည်းက ညစ်ပတ်တော့မယ် ဆိုတာ သိထားပါရက်နဲ့ဗျာ…။
ရန်ကုန်ကိုသာ ရောက်လာလို့ကတော့ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့
ကိုယ့်ထက် အင်အားကြီးတဲ့ ရန်သူကို အနိုင်ရဖို့ဆိုတာ
စိတ်ဓါတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
နည်းဗျူဟာလည်း ကြွယ်ဝဖို့ အမှန်တကယ်လိုအပ်လှပါတယ်ဗျာ…။
Mr. MarGa says: What’s behind tha curtain?
A gun? A rose? A rabbit?
naywoon ni says: ကို ကန်​ဒီ အဲ့ ကိုသဂျားလုံး အဲ အူမာဃ အီးလိုမ​ပြောနဲ့ဂျာ ။ ကျ​နော်​က စာမတတ်​ဘူး ။ ဂန်း​တွေ​ကော ရို့စ်​​တွေ​ကော ယုန်​​တွေ​ကော ရှုပ်​ယှက်​ခတ်​​နေတာပဲ ။ ကျ​နော်​ သိတာက​တော့ ဂန်းန်​အင်​ရို့ စ်​ ပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: So it is possible to callaMagic show. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: ဖုန်းနဲ့ဝင်ချောင်းတော့ မြန်မာလိုရိုက်ရမှာ ပျင်းသွားလို့ပါဗျာ…
ကန့်လန့်ကာနောက်က ထပ်ထွက်လာမယ့် အခင်းအကျင်းကို စိတ်ဝင်စားနေမိသဗျို့
Alinsett@Maung Thura says: .ငွေရောင်ပိတ်ကားကြီး သွေးရောင် လွှမ်းမသွားဖို့ပဲ….ဆန္ဒရှိပါတယ်…
naywoon ni says: အဲ့ဒီ​တော့လည်း ကြက်​​သွေး​ရောင်​ ကတ္တီပါ ပိတ်​ကားကြီးဖြစ်​သွားမှာ​ပေါ့ကွယ်​ ခန့်​ခန့်​ထည်​ထည်​ကြီး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: အဲ့
ပြဇာတ်မှာ ….လူကြမ်း/လူယုတ်မာ/လူမိုက် တွေကတော့ ဒီ အဖွဲ့တွေချည်းပဲနော်???
ဒီဝတ်စုံနဲ့ ဒီ လက်နက်တွေပဲ ကိုင်ကြတယ်။
ဒီ ပြဇာတ်မှာ ….
naywoon ni says: အဲ့သဟာက​တော့ ခု​ခေတ်​ ဗွီဒီယို​တွေမှာလဲ ဒီအတိုင်းပဲ​လေ ။ ဟိုအရင်​က ရုပ်​ရှင်​မှာ သမတ လူကြမ်းအဖွဲ့က နာမယ်​ကြီးသား ။
တိမ်မည်း says: အခု ပီးသွားပီလေ… ၁၁ ချက်က ရမဲ့ ၈ချက်လည်း ပလုံ…. ကျောင်းသားတွေလည်း အရိုက်ခံရ…. ထောင်ထဲရောက်ရ… အစိုးရကို လူတွေက ပိုမုန်း…. ထိန်းမနိုင် သိန်းမရ ပွဲတွေ ထပ်လာဦးမယ်…. ရှေ့ လျှောက် ဒီထက် ဆိုးတဲ့ပွဲပဲ မျှော်လင့်လိုရတော့မယ်… အမုန်းပေါ် အမုန်း ဆင့်သွားပီ…
naywoon ni says: လာပါဘီဗျာ ။ လက်​ပတ်​ဖြူ လှုပ်​ရှားမှု ဆိုလား ဘာလား We are student . ဆိုလားဘာဆိုလား ၁၃ရက်​​နေ့စမြီ ဒဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: လူတွေက မင်းသမီးထွက်ဖို့ထက် လူပြတ်ပြတ်တာကို ပိုကြိုက်ကြတယ်လေ။
ဒီလိုနဲ့မိုးသာလင်းရော မင်းသမီး ထွက်နိုင်မယ်မထင်
naywoon ni says: လူ​တွေက မိုးလင်းသွားလည်းမင်းသမီး ထွက်​မလာလို့​တော့ ပွဲအသိမ်းခံမယ်​မထင်​
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: မင်းသမီးလည်း မထွက်နိုင် ပွဲသိမ်းလို့လဲမရ တစ်ထောင့်တစ်ညဇာတ်ကနေမှ လူတွေလည်းမျက်တွင်းဟောက်ပက်ချုန်းချုန်းကျ
naywoon ni says: အဲ့ဒိ​လောက်​ လူ​တွေ အိပ်​​ရေးပျက်​ခံကြမှာ မဟုတ်​​တော့ဘူး ခု​တောင်​ဇာတ်​ခုံ ခဲနဲ့ထုဖို့ လူစု​နေဘီ ဆိုလား ဘာဆိုလား သဲ့သဲ့ ကြား​နေရတယ်​ Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.